सुन काण्ड र लोकमानको साइनो के ?
काठमाडौं । अन्दाज गरौं लोकमान त्यतिबेर सुनकाण्डमा मुछिएको प्रमाणित भइसकेको बर्दीधारीहरुलाई नजोगाएको भए आज यति ठूलो काण्ड घट्थ्यो–घट्दैनथ्यो ? यति धेरै जनधनको क्षति हुन्थ्यो–हुन्थेन ? र, यति ठूलो फौज (नेपाल प्रहरी) ले यस्तो साह्रो बदनाम हुनपथ्र्यो पर्थेन अनि तस्करीले यति डरलाग्दोसँग संस्थागत रुप लिन पाउँथ्यो कि पाउँथेन ?
तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले अहिलेकै सुनकाण्डमा संगल्न व्यक्तिहरुलाई संलग्न गरेको, उक्साएको प्रमाणहरु यथेष्ट भेटिएका छन् । सीसीटिभीको फुटज, साक्षी प्रमाणहरु र उनको नाम लिँदै तस्करीको काम थालौं भन्न्हरुको नाम–नामेसी लहरो तान्दा पहरो गर्जिने शैलीमा जुटेको हो ।
कथाको सुरुवात हुन्छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएका एसपी विकासराज खनालबाट । २०७२ सालको माघ ११ गते राति ८ बजे फ्लाई दुबाईको जहाजबाट उत्रिएका यात्रु कालो ज्याकेटमा छन् ।अध्यागमन डेस्क पार गरि खनाल सोझै आएर उनलाई एयसकण्डिसनको छेउको कुनामा लगी भेट्छन् ।
प्लाष्टिकको झोलाबाट झिकेर २० सेकेन्टभित्र आफ्नो ज्याकेटको भित्री गोजीमा सुन हाल्छन्, लतत्तै बाहिर निस्किएर रातो प्लेटको स्यान्ट्रो कारमा चढ्छन र गौशलातिर हुँईकिन्छन् । उनलाई यसरी सीसीटिभीबाट निगरानी गर्ने असई हुन् ध्रुव गिरी । उनले डिआईजी विजयलाल कायस्थलाई यसबारेमा रिपोर्ट गरेलगत्तै विजयलालाले पनि तत्कालीन महानिरक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई इतिवृतान्त सुनाउँछन् । विजयलाल त्यतिबेला एमपीए को जाँच दिन बिदामा बसेका भए पनि विषयको गम्भीरतालाई महसुस गर्दै छानबिनकाृ काममा जुट्छन् । आजको जनआस्थाबाट ।